Happy Deepawali and Tihar
Topic: Happy Deepawali and Tihar
Author Topic: Happy Deepawali and Tihar (Read 17949 times)
« on: October 17, 2009, 11:43:41 AM »
Happy Tihar (Deepawali) to all forum members and visitors.
Re: Happy Deepawali and Tihar
« Reply #1 on: October 17, 2009, 11:44:45 AM »
कलाकारको तिहार अनि जुवातास !
तिहारमा कोही बत्ती बालेर आफ्नो घर सजाउन रमाईलो मान्छन् भने कोही देउसीभैलो खेलेर रमाईलो गर्छन् त कोही जुवातास खेलेर रमाईलो गर्ने गर्दछन् । तिहारको पूर्वसन्ध्यामा घर सजाउन प्रयोग गरिने थुप्रै रंगिन बत्तिहरू होस् या बत्तिहरूको झिलिमिली अनि भाईटिकाको दिन प्रयोग गरिने सप्तरंगी टिका, त्यसले वस्तवमै तिहारलाई रंगिन तथा उमंगको चाडको रूपमा लिईन्छ ।
दशैको बिदाई सँगै तिहारको रमझमले सबैलाई छोएको छ । बर्षमा एकपटक आउने यो महान पर्वलाई नेपाली कलाकर्मीहरूले पनि आ-आफ्नै तरिकाले तिहार मनाउन जुटेका छन् । अपबादमा केही कलाकर्मीले तिहार मनाउन नभए पनि तिहारको यो उमंगलाई सबैले आत्मसाथ गरी बिभिन्न तरिकाले मनाउने सोच बनाएका छन् । यहि तिहारको परिबेशमा रहेर फिल्मीखबर डटकमले नेपालका केहि कलाकार्मीसँग तिहारको बिषयमा गरिएको छोटो कुराकानी ।
राजेश हमाल (नायक)
तिहारमा मेरो बिशेष योजना केही पनि छैन । मलाई तिहारमा रमाएलो गर्न नै आँउदैन र पनि म आफ्नो परिवारसँग बसेर तिहार मनाउछु । आफू नखेले पनि मलाई देउसीभैलो खेलेको हेर्न मन पर्छ । म जुवातास कहिल्यै खेल्दिन र अरूले खेलेको पनि मन पर्दैन । मलाई तीन पत्ति फलाँसको नाम बाहेक अरू खेलको नाम पनि थाहा छैन ।
झरना थापा (नायिका)
सधैंको जस्तै गरि अहिले पनि म बत्ति बालेर, सेल रोटी पकाएर, देउसीभैली खेल्नेलाई सहयोग गरेर, तास खेलेर तिहार मनाउने सोच छ । बच्चा छदाँ देउसीभैली खेलेको अझै पनि सम्झना आउँछ तर अहिले रहर लाग्छ अरूले खेलेको देख्दा । रहर गरेर पनि खेल्न पाईदैन के गर्नु ? प्राय सबैले खेल्ने गरेको खेल म्यारिज मलाई खेल्न आउँदैन त्यसैले म जुट पत्ति र फलाँस खेल्ने गर्छु । १० देखि २० रूपिँया सम्म बोट राखेर तास खेल्ने गरेकी छु । तास जुवाको रूपमा नखेली मनोरञ्जनको रूपमा खेल्ने गरेकी छु ।
दिपाश्री निरौला (हाँस्यकलाकार)
अहिले मैले भाईलाई टीका लगाउन पाउदिन किनकी मेरो भाई अहिले लण्डनमा छ । टीकाको दिन उसलाई एकदम सम्झिने छु । टीका लगाईदिन नपाए पछि अहिलेको मेरो तिहार खासै रमाईलो हुदैन । तर पनि घरमा बसेर लक्ष्मीपूजा गरेर, बत्ति बालेर, सेलरोटी पकाएर, टन्न खाएर र तासमा १०० रूपियाँ सम्म बोट हालेर फलाँस खेलेर रमाईलो गरिन्छ । तासमा मैले धेरै त खेल्दिन, त्यहि १० देखि १५ हजार सम्मको खेलिन्छ होला !
रात दिन सुटिङमा व्यस्त रहने हुनाले तिहार आउनु र नआउनुमा मलाई केहि फरक छैन । मेरो चलचित्र निशाना अहिले राजधानिमा प्रदर्शन भईरहेको छ त्यसैको चाँजो पाँजो मिलाउनमा नै म बढी व्यस्त रहने हुनाले तिहार मेरो लागी रमाईको को चाड बन्दैन । तिहार मनाउने रहर पनि छैन । तर पनि २ जना दिदीहरूको हातबाट टिका ग्रहण लगाउँछु । जुवातासको त कुरै नगरौं । जुवातास मलाई मन पनि पर्दैन ।
योगेश घिमिरे (निर्देशक)
अहिलेको तिहारमा म आफ्नो घर झापा जाँदै छु । तर तिहारको बिशेष योजना केहि पनि छैन । तर घर गएपछि तास खेल्न भने छोड्दिन । फलाँस बाहेक अरू खेल खेल्न आउँदैन त्यसैले जुवाको रूपमा नलिएर रमाइलोको रूपमा फलाँस खेलेर तिहार मनाउने हो ।
रेखा थापा (नायिका)
मेरो बुवा बित्नु भएको १ बर्ष पनि पुगेको छैन त्यसैले यो बर्षको तिहार मेरो लागि शुन्य हुने छ । तिहारमा म शुटिङमा नै व्यस्त हुन्छु ।
अहिले चितवनमा मेरो चलचित्र 'कोही मेरो' को छायाँकनमा व्यस्त छु । त्यसैले अहिलेको तिहार मेरो खासै रमाएलो पर्वको रूपमा हुने छैन । तर पनि म आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर, लक्ष्मीपूजा गरेर, परिवारसँग तास खेलेर तिहार मनाउने छु । तिहारमा म बिशेष गरि आफ्नै बुवा-आमासँग बसेर रमाईलोको लागि तास खेल्ने गर्दछु । मलाई म्यारिज खेल्न एकदम मनपर्छ ।
« Reply #2 on: October 17, 2009, 11:44:58 AM »
जीवन लुईटेल (नायक)
मेरो अहिलेको तिहार पहिलेको जस्तै हुने छ । सुटिङ पनि भर्खर सकिएको छ, त्यसैले घरमा नै बसेर रमाईलो गरिन्छ । साथीभाईहरू सँग बसेर रमाईलो गरिन्छ होला । देउसीभैलो खेलेको हेर्ने, अरूले पटका पड्काउछन्, त्यसैमा आनन्द लिने हो । तास म खासै खेल्दिन ।
रोज मोक्तान (गायक)
मेरो त लक्ष्मीपूजाको दिन कार्यक्रम छ, त्यसैले त्यो दिन रमाईलो नै हुन्छ । त्यस पछि घरमै बसेर साथीहरू र घरपरिवारसँग बसेर रमाईलो गरिन्छ । तास खेलेर दिन बिताउने बिचार छ । बिशेष गरि तासमा म्यारिज खेलिन्छ तर धेरै हैन ५ देखि १० रूपिँया प्वाईन्ट सम्म । गयो भने २००० हजार सम्म जाने गरेर खेल्छु त्यो भन्दा धेरैको खेल्दिन । अनि भाईटीकाको दिन दिदी-बहिनीसँग टिका लागाएर रमाईलो गरिन्छ ।
कुञ्जना घिमिरे 'सुन्तली' (हाँस्यकलाकार)
मेरो बिबाहपछीको पहिलो तिहार भएकोले यो बर्षको तिहार मेरो लागि बिशेष हुने छ । घरमा बसेर लक्ष्मीपूजा गरेर, बत्तिबालेर, घर सजाएर तिहार मनाउँछु । पोहोर साल सम्म त देउसीभैलो खेलिन्थ्यो तर अब बिबाह भए पछि खेल्न सुहाएन, त्यसैले अरूले खेलेको हेरेर रमाईलो गर्नु पर्ला । हल्का घरपरिवारसँग बसेर म्यारिज पनि खेलिन्छ । तर तास खेलेपनि जुवाको रूपमा कसैलाई पनि नखेल्न आग्रह गर्छु ।
सिताराम कट्टेल 'धुर्मुस' (हाँस्यकलाकार)
गाउँमा भएको भए देउसीभैलो खेलेर तिहार मनाइन्थ्यो तर अहिले म काठमाण्डौ मा नै हुन्छु त्यसैले देउसीभैलो खेल्न त पाउँदिन तर पनि तास खेलेर रमाईलो गरिन्छ । मलाई फलाँस एकदम मन पर्ने खेल हो तर म्यारीज पनि हल्का खेल्छु ।फलाँस खेले भने जित्छु पनि र म्यारीजमा त म सधैं हार्छु त्यसैले मलाई म्यारीज खासै मन पर्दैन । तासमा १० हजार सम्मको खेल खेल्ने गर्छु । तास खेल्ने क्रममा गत बर्ष मिडियाहबमा १२ हजार हारेको थिएँ । १२ हजार फालेपछि घर फर्कने बेलामा घुमाएर मैले आफ्नो बाईक नचिनेको अहिले सम्म बिर्सन सक्दिन । यो मेरो जीवनको अविश्मरणिय क्षण पनि हो ।
राजबल्लभ कोईराला (नायक)
मेरो अहिलेको तिहार रमाईलो होला जस्तो छैन । सुटिङमा व्यस्त भएको हुनाले पहिलाको जस्तो गरेर रमाईलो गर्न नपाउने भएको छु । त्यसै माथि बहिनी पोखरामा छ भेट पनि नहुन सक्छ । तर सुटिङबाट समय मिलेपछि साथीभाईसँग बसेर तास खेलेर रमाईलो गरिन्छ । तर तास भन्दैमा जुवाको हिसाबले म खेल्दिन, मात्र रमाईलोको लागि खेल्ने गर्छु ।
रञ्जु लामिछाने (नायिका)
तिहारमा म आफ्नो घर सिक्किममा हुन्छु । मलाई बत्तिबाल्न, घर सजाउन, पटका पड्काएको हेर्न र देउसीभैलो खेलेको हेर्न एकदम मन पर्छ । त्यसैलेत्यसैले म यिनै कुराहरूमा रमाईलो गर्छु । हामी घरमा स-परिवार बसेर घरमा आएका देउसीभैलो खेलेको हेर्छौं अनि त्यसैबाट मनोरञ्जन लिन्छौं । भाईटीकाको दिन भाईलाई टीका लागाई दिन्छु । अनि दिनभर घरमै बसेर परिवारसँग रमाईलो गर्छु । हाम्रो घरपरिवारमा तास खेल्ने चलन छैन, र मलाई तास खेलेको पनि मन पर्दैन ।
सुगम पोखरेल (गायक)
मेरो आफ्नो अफिसबाट बिदा नमिल्ने भएकोले मेरो तिहार काठमाण्डौमा नै हुनेछ । यहि टीका लगाएर, जुवातास खेलेर, साथीहरूसँग रमाईलो गरेर तिहार मनाउने हो ।
भरत सिटौला (गायक)
आम नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरूले जसरि मनाउनु हुन्छत्यसरी नै मेरो तिहार हुने छ । खासै केहि योजना छैन । टीका लगाउने, साथिभाईहरूसँग रमाईलो गर्ने अनि दिनभर म्यारिज खेलेर बस्ने हो । अँ साच्चै ! सेलरोटी टन्न खाने हो ।
शुसिल क्षेत्री (नायक)
तास नखेली तिहार रमाईलो हुन्न भन्छन् साथीहरू तर म म तास खेल्दिन । साथीभाईसँग भेट भएर, दु:ख सुखको कुराहरू गरेर तिहार मनाउने सोच गरेको छु । तिहारमा खासै फुर्सद पनि छैन, किनकी अहिले म 'कबच' चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त हुन्छु ।
मौसमी गुरूङ (गायिका)
भाई स्कटल्याण्डमा भएकोले अहिलेको मेरो तिहार खासै रमाईलो पर्वको रूपमा रहने छैन । तिहार बिशेष योजना पनि केहि छैन । घरमै बुवा-मम्मीसँग बस्छु, पाहुनाहरू आउनु हुन्छ । सबैलाई पकाएर खुवाउदै तिहार मनाउने हो । तास म खासै खेल्दिन । खेलीहाले पनि घरमा आफ्नै दिदी-बहिनीहरूसँग बिना पैसाको खेलीन्छ । अहिले सम्म म पैसा हालेर तास खेलेको पनि छैन ।
रामचन्द्र काफ्ले (गायक)
मेरो त अहिलेको तिहार एकदम रमाईलो हुने छ । आज लक्ष्मीपूजाको दिन एउटा साँगितिक कार्यक्रम छ, त्यसैमा रमाईलो गरिन्छ । त्यसपछि गाँउका साथीहरू र काठमाण्डौका साथीहरूसँग मिलेर बाजागाजा सहित देउसीभैलो खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसबाट उठेको रकम सामाजिक कार्यमा लगानी गरिन्छ । मलाई तास खेल्न आउँदैन र तास खेलेको पनि मन पर्दैन ।
सिन्धु मल्ल (गायिका)
मैले अहिलेको तिहार आफ्नै घर डडेल्धुरामा मनाउने छु । घरपरिवारमा बसेर। सेलरोटी, फिनी लगायतका बिभिन्न परिकारका रोटीहरू पकाएर, बत्ति बालेर तिहार मनाईन्छ । देउसीभैलो खेल्न आउनेहरूसँग पनि रमाईलो गरिन्छ । तिहारमा तास खेल्नु सर्वव्यापी चलन भएकोले म पनि यो खेल्नबाट पछि हट्दिन । तर आफ्नै घरमा बसेर दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर ५० पैसा देखि १ रूपियाँसम्म बोटहालेर जुट पत्ति खेलिन्छ ।
बाबुराम दाहाल (गितकार)
अहिले त मलाई तिहारमा भ्याई नभ्याई हुन्छ । तिहारमा बढीपिडितको लागि च्यारिटी शो गर्ने योजना छ । त्यसपछी टीकाको दिन काठमाण्डौमा बहिनीसँग टीका लगाएर नेपालगंज दिदीको हातको पनि टीका लगाउन जान्छु । ३ बर्षपछि दिदीको हातबाट टीका लागाउन पाउने हुँदा एकदम रमाईलो अनुभुति हुँदैछ । तास खेल्न आउँदैन र खेलेको पनि मन पर्दैन ।
सुरेश अधिकारी (संगितकार)
पहिला पहिला त देउसीभैलो, जुवातास खेलेर तिहार मनाउने गरिन्थ्यो तर अहिले यसो गर्न पनि सुहाएन । त्यसैले तिहारमा बिशेष केहि हुने छैन । दिदीबहिनीहरूबाट टीका लगाईन्छ । गायिका अञ्जु पन्त मेरी बहिनी हुन् उनले पनि मलाई टीका लागाईदिन्छीन् । दिदीबहिनीहरूलाई उपहार दिईन्छ त्यसको बदलामा टन्न खान पनि पाईन्छ ।
केशब भट्टराई (चलचित्र निर्माता तथा कलाकार)
१० बर्ष पछि अहिले दिदीको हातबाट टीका लगाउने मौका पाएको छु । त्यसैले अहिलेको तिहार मेरो बिशेष तिहार हुन्छ । तास, पटका र उछ्रिङ्खल देउसीभैलोको म कट्टर बिरोधी हुँ । तै पनि देउसीभैलोको लागि बिभिन्न संघसँस्थाहरूबाट निमन्त्रणा आएको छ । सभ्य तरिकाले खेलिने देउसीभैलोमा सहभागी भएर अहिलेको तिहार मनाईन्छ ।
डम्बर नेपाली (गायक)
दिदीको हातबाट टीका थाप्न म आफ्नो जन्म स्थल उर्लाबारी जान्छु । मोबाईलको स्विच अफ गरेर भए पनि घरमा नै आफ्नो परिवारसँग रमाईलो गरेर तिहार मनाउने छु ।
« Reply #3 on: October 18, 2009, 12:05:05 AM »
« Reply #4 on: October 18, 2009, 12:05:49 AM »
« Reply #5 on: October 20, 2009, 01:14:04 PM »
« Reply #6 on: October 22, 2009, 05:25:13 AM »
व्यस्त संगीतकार सुरेश अधिकारीलाई तिहारमा पनि फुर्सद थिएन। फिल्म 'पर्खिराख है'को गीत रेकर्ड गर्न उनी मुम्बई जानुपर्थ्यो। उनी गएनन्। आफ्नी नयाँ बहिनीको हातबाट भाइटीका लाउन उनले मुम्बईको कामलाई पछि सारे। उनकी नयाँ बहिनी हुन् गायिका अञ्जु पन्त।
(source - http://nagariknews.com/ent/other-ent/6147-2009-10-21-03-35-01.html)
Tihar (कुकुर तिहार)
« Reply #7 on: November 11, 2015, 04:40:42 AM »
जंगली स्याल घरपालुवा कुकुर बनेको नेपालबाटै
आज कुकुर तिहार। बिहानै घर वा टोलका कुकुरलाई फूलमाला लगाइदिएर, मासुभात खुवाएर पूजा त पक्कै गर्नुभयो होला!
पूजा गर्दा तपाईंले तिनका तेजिला आँखा, पुटुक्क परेको रसिलो नाक, धारिला दाँत, लत्रिएका लामा-लामा कान, बाक्लो भुत्ला वा घुम्रिएको पुच्छर कत्तिको ख्याल राख्नुभयो त?
प्रश्न पढ्नेबित्तिकै तपाईंको अनुहारमा हल्का मुस्कान नाच्यो होला। मनमा खेल्यो होला, कुकुरको जातै त्यस्तो, यसमा ख्याल राख्नुपर्ने के नै छ र?
उसो भए लौ सुन्नुस्।
राम्ररी ध्यान दिएर हेर्ने हो भने तपाईंले कुकुरका आँखामा यस्तो तेज पाउनुहुन्छ, जुन उच्च हिमाली भेगको छाला डढाउने तेजिलो घाममा टाढाटाढाका दृश्य हेर्न काम लाग्छ।
कुकुरका नाक प्रायः पानी बगेर रसिलो किन भइरहने होला? कतै त्यो हिमाली चिसोपनाको अनुभूति गराउन त हैन?
कुकुरका भुत्ला राम्ररी हेर्नुस् त, हिमाली भेगको ठिहिरो जाडो छेक्नसक्ने बाक्लो छ।
यो समानता संयोग मात्र हो वा यसमा केही सम्बन्ध पनि छ ?
कुकुरहरूको जैविक विकास क्रमसम्बन्धी प्रकाशित पछिल्लो वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने यसमा संयोगभन्दा सम्बन्ध नै बढ्ता देखिन्छ।
संसारका विभिन्न देशबाट संकलन गरिएको कुकुरको डिएनए परीक्षणबाट वैज्ञानिकहरू के नतिजामा पुगेका छन् भने, घरपालुवा कुकुरको विकास मध्य–एसियाबाट भएको हो। त्यसमा पनि नेपाल वा मंगोलियाबाट कुकुर घरमा पाल्ने चलन सुरु भएको निष्कर्षमा वैज्ञानिकहरू पुगेका छन्।
नेपालमा कुकुर पूजा गरिने भएर मात्र होइन, संसारभरि नै यो जनावरलाई मान्छेको निकट साथीका रूपमा लिइन्छ। यसले घरको रक्षा गर्नु, चोरहरूबाट खबरदारी गर्नु, प्रहरीलाई अपराधी पत्ता लगाउन मद्दत गर्नु वा उहिले–उहिले शिकारीलाई जंगलमा साथ दिनु त सामान्य भए, वैज्ञानिकहरूले कुकुरसँग मान्छेको भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको बताएका छन्। भन्नुको मतलब, मान्छेलाई जस्तो पीडा हुन्छ, कुकुरले त्यस्तै पीडा अनुभूत गर्न सक्छ। वा, मान्छेको खुसी र दुःखलाई जस्ताको तस्तै महसुस गर्न सक्ने खुबी कुकुरमा मात्र हुन्छ।
के कुकुरहरूमा सृष्टिदेखि नै यस्तो खुबी थियो त?
हजारौं हजार वर्षअघि अहिले जुन घरपालुवा जनावरलाई हामी कुकुर भन्छौं, त्यो थिँदै थिएन। योसँग मिल्दोजुल्दो स्याल थियो, जुन अहिले पनि छँदैछ। त्यही जंगली स्याल र मान्छेबीच कुनै जमानामा सुरु भएको घनिष्ठताबाट नै यो धर्तीमा मानव जातिको प्रिय घरपालुवा जनावर कुकुर विकास भएको हो।
वर्षौंदेखि कुकुरको यो रहस्यपूर्ण कथा खोतलिरहेका वैज्ञानिकले जंगली स्यालबाट घरपालुवा कुकुर विकास भएको समय कम्तीमा १५ हजार वर्ष अघिलाई मानेका छन्। पहिले दक्षिणी चीन, मध्यपूर्व, साइबेरिया र युरोपबाट घरपालुवा कुकुर विकास भएको अनुमान थियो। नयाँ अनुसन्धानले भने मध्य–एसियालाई घरपालुवा कुकुरको उद्गम स्थल मानेको छ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित कर्नल युनिभर्सिटी कलेज अफ भेटेरिनरी मेडिसनको एडम बोयको ल्याबरेटोरीले संसारका ३८ देशबाट ५ सय ४९ थरीका कुकुरको डिएनए परीक्षण गरी यो निष्कर्ष निकालेको हो। वैज्ञानिकहरूले एसिया, अफ्रिका, अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व, अस्ट्रेलिया लगायत संसारभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुकुरको डिएनए संकलन गरेका थिए।
यो अनुसन्धानमा घरमै पालिएका कुकुरको डिएनए परीक्षण गरिएको थिएन। ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेसँगै घुलमिल भएर बसोबास गर्ने र त्यहीँका गल्लीमा निस्फिक्री घुमफिर गर्ने कुकुरको डिएनए अनुसन्धानमा सामेल गरिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार कुकुरको सबभन्दा पुरानो पुर्खाको खोजीमा यो परीक्षण केन्द्रित थियो। र, नतिजा निस्क्यो– मध्य–एसियाको नेपाल वा मंगोलिया। यो नतिजा करिब तीन साताअघि नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेसको जर्नलमा प्रकाशित भइसकेको छ।
घरपालुवा कुकुरको पुर्खाको खोजीमा यो अहिलेसम्मकै गहन निष्कर्ष भए पनि अन्तिम भने नभएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।
एडम बोयको आफैं पनि यो नतिजाले वैज्ञानिकहरूबीच लामो समयदेखि जारी बहस अन्त्य नहुनेमा सहमत छन्। ‘यो अनुसन्धान नै अन्तिम हो भनेर म भन्दिनँ,’ उनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा थप अनुसन्धान गर्न सहयोग भने पु¥याउनेछ।’
घरपालुवा कुकुरको पुर्खाको खोजीमा दत्तचित्त केही वैज्ञानिक एडम बोयकोको निष्कर्षसँग सहमत छैनन्।
नयाँ अनुसन्धानमा दक्षिणी चीनमा पाइने कुकुरको डिएनए नमूना नसमेटिएको औंल्याउँदै उनले ‘द क्रिश्चियन साइन्स मनिटर’ सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘उनीहरू दक्षिणी चीनबाट विकास भएको विश्वास गर्दैनन् भने कम्तीमा त्यहाँका कुकुरको डिएनए परीक्षण गरेर यो मान्यतालाई वैज्ञानिक रूपमा अस्वीकार गर्ने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो।’
बोयकोको भने आफ्नै तर्क छ।
कसरी भए कुकुर मानिसको साथी?
कुकुर संसारकै पहिलो घरपालुवा जनावर हो भन्नेमा वैज्ञानिकहरू सहमत छन्। तर, मानिसले नियोजित रूपमै यसलाई आफ्नो साथी बनाएका होइनन्।
यसमा सबभन्दा विश्वासिलो अनुमान के भने, मानिसहरू समूहमा बस्न थालेपछि जंगलका स्याल आहाराको खोजीमा मानव बसोबास छेउछाउ जान थाले। मानिसले आफूले खाएर फाल्ने खानेकुरा नै उनीहरूको आहारा बन्दै गयो। पछि यो यति नियमित हुँदै गयो, मानिसको समूह शिकारका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चहार्दा पनि ती स्याल पछ्याउँदै हिँड्न थाले।
मान्छेलाई पनि उनीहरूको साथ सहज लाग्दै गयो। शिकारको निम्ति जंगल–जंगल भौंतारिँदा स्यालको साथ पाएर एक किसिमले सुरक्षाको अनुभूति पनि भयो। त्यसैले, न मान्छेले तिनलाई लखेटे न तिनले मान्छेलाई पछ्याउन छाडे।
गत वर्षको एक वैज्ञानिक अनुसन्धानअनुसार स्याल र कुकुरबीच एउटै मात्र असमानता भेटिन्छ। वर्षौंदेखि मानिससँग घुलमिल भएर बस्दा कुकुरको पाचन प्रणाली र पाचन रस लगभग मान्छेकै जस्तो भइसकेको छ। हजारौं हजार वर्षदेखि मान्छेले खाने चिजमै निर्भर रहँदै आएकाले कुकुरको पाचन रस र प्रणालीमा त्यसैअनुरुप परिवर्तन आएको वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ।
उक्त अनुसन्धानमा सामेल स्विडिस समूहका अनुसार मान्छेले खाने आहारा मन पर्ने भएकैले कुकुर मानव जातिसँग घुलमिल भएको हो। मान्छेलाई पनि उनीहरूसँग बढ्ता सहज अनुभूति हुँदै गएकाले यो सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन्।
कुकुरको पुर्खाको खोजी किन?
वैज्ञानिकहरूले यति लामो समय खर्च गरेर कुकुरको पुर्खामाथि अनुसन्धान गर्नुको कारण के त?
‘कुकुरको पुर्खाको खोजी भनेको एक किसिमले मान्छेकै पुर्खाको खोजी हो,’ एडम बोयकोको भनाइ छ, ‘कुकुरको कथाले वास्तवमा हामीलाई मानवीय विकासक्रमकै नयाँ कथा थाहा पाउन मद्दत गर्छ।’
पहिलो घरपालुवा जनावरका रूपमा कुकुरको इतिहासले मानव इतिहासकै पृष्ठभूमि छर्लंग पार्ने उनले बताएका छन्।
अर्का वैज्ञानिक पिटर साभोलेनिन पनि कुकुर र मानव इतिहासबीच अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। ‘हजारौं हजार वर्षदेखि कुकुरले मान्छेलाई पछ्याउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘कुकुरको इतिहास खोज्नु भनेको मान्छेकै इतिहास थाहा पाउनु हो। र, यो एउटा देशका लागि मात्र होइन, हरेक देश र हरेक महादेशका हकमा लागू हुन्छ।’
‘त्यसैले, मानव इतिहासको खोजी हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ भने कुकुरको इतिहास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
मानिस र कुकुरको यो घनिष्ट सम्बन्धलाई नेपालले जति अरू कसले आत्मसात गरेको होला, जहाँ सांस्कृतिक रूपमै कुकुरलाई फूलमाला लगाएर पूजा गर्ने चलन छ।
तपाईंले बिर्सनु त भएन आज कुकुर पूजा गर्न!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २४, २०७२
Re: Tihar (कुकुर तिहार)
« Reply #8 on: November 11, 2015, 04:43:34 AM »
Kukur (Dog) Tihar: Today is the second day of Tihar and is called Kukur Tihar or Khichā Pujā (worship of the dogs). It is also called the Khicha Puja by the Newars. Dogs, which are believed to be messengers of Lord Yamaraj, the God of Death, are worshiped once each year on this day. People offer garlands, tika and delicious food to dogs and acknowledge the cherished relationship between humans and dogs. This day is also observed as Narka Chaturdashi.
Tihar isafive-day-long Hindu festival celebrated in Nepal which comes soon after Dashain. It is the festival of lights.The five-day festival is considered to be of great importance as it shows reverence to not just the humans and the Gods, but also to the animals like crows, cows and dogs who maintain an intense relationship with humans. Our lovely Shimba was worshiped and we all enjoyedalot.
« Reply #9 on: November 13, 2015, 02:02:33 AM »
« Last Edit: October 26, 2016, 03:17:53 AM by tundikhel »